महासमिति बैठकले कांग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउला? - dsnews
तीन वर्षअघि भएको महाधिवेशनपछि देशभरका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता एकपटक फेरि काठमाडौं भेला भएका छन्। शनिबारदेखि सुरू हुने महासमिति बैठकमा झन्डै १७ सय कांग्रेसजन सहभागी हुनेछन्। महासमिति महाधिवेशनपछि कांग्रेसको ठूलो कुम्भमेला हो। संख्यामात्र होइन अधिकारका हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ किनकी महाधिवेशनले चुन्ने नेतृत्वबाहेक यसले पार्टीका सबै विषयमा निर्णय गर्न सक्छ।
गत वर्षको चुनावी हारपछि बस्न लागेको कांग्रेस महासमिति बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको केही दिनअघिको अभिव्यक्तिले पनि त्यसको पुष्टी गर्छ।
संघ र प्रदेश चुनावमा भएको हारबारे देउवाले गत साता पहिलो पटक आत्मालोचना गरेका थिए-डडेल्धुरामा म र कैलालीमा आरजु चुनाव लडेपछि जनताले किन भोट दिन्थे र!
महासमितिको मुखैमा देशभरिका नेता कार्यकर्ताको सहानुभूति पाउन देउवा उक्त अभिव्यक्तिको धेरैको बुझाइ छ।
महासमिति किन महत्त्वपूर्ण?
चुनावी हारको महत्त्वपूर्ण कारण टिकट वितरण र नेतृत्वको कार्यशैली भएको बताउँदै देउवाको आलोचना भइरहेको छ। महासमिति बैठकमार्फत् देउवा आफूअनुकूल पार्टीको भावी राजनीतिक र आर्थिक नीति पारित गराउन चाहन्छन्। २०७२ मा सभापति चुनिएपछि देउवाले पहिलो पटक महासमिति बोलाएका छन्। जबकी विधानत:महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक अरू वर्ष एक पटक महासमिति बैठक गर्नुपर्ने हुन्छ।
महासमिति बैठक महत्त्वपूर्ण हुनुका पछाडि यो कांग्रेसको नीति अधिवेशन हो। यसले नीतिहरू बनाउँछ। एउटा महाधिवेशन भएर अर्को महाधिवेशन नहुञ्जेलको अवधिमा पार्टीले कुनै नीति वा कार्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने महासमितिमार्फत् निर्णय हुन्छ।
‘महाधिवेशन पार्टीको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय हो। जसले नीति पनि बदल्न सक्छ र नेतृत्व पनि बदल्न सक्छ। तर, महासमिति त्यसपछिको अर्को निकाय हो- जसले नेतृत्व बदल्न त सक्दैन तर, नीति बदल्न सक्छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने।
यसअघि २०६२/०६३ आन्दोलन पछाडिको महासमिति बैठकले पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र राख्ने निर्णय गरेको थियो।
यसपालिको महासमिति बैठकमा के हुन्छ?
बैठकमा पाँच वटा दस्तावेज छलफलका लागि पेश हुनेछन्।
पहिलो, राजनीतिक दस्तावेज।
यसभित्र वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिएको छ भन्ने उल्लेख हुन्छ भने सरकार र अन्य दललाई हेर्ने दृष्टिकोण समावेश हुन्छ।
दोस्रो, पार्टीको आगामी आर्थिक नीतिबारेको दस्तावेज।
कांग्रेसको समग्र आर्थिक दृष्टिकोण यसमा समेटिएको हुन्छ। अर्थनीति के हो? विगतमा भएका उपलब्धिलाई कसरी हेरिएको छ? आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने, सरकारको आर्थिक गतिविधिबारे कांग्रेसको मूल्यांकन के छ? त्यो समावेश हुन्छ।
अघिल्लो महाधिवेशनदेखि यहाँसम्म आउँदा संगठनमा के भयो भन्ने यसमा समेटिएको हुन्छ। महामन्त्रीले सांगठनिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्छन्।
चौथो-संशोधित विधान मस्यौदा।
बैठकमा पार्टीको जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने संशोधित विधान मस्यौदा प्रस्ताव पेश हुन्छ।
यो कोषाध्यक्षले बैठकमा पेश गर्ने प्रतिवेदन हो। जसमा पार्टीको आयव्ययको हिसाब पेश गरिएको हुन्छ।
यी पाँच दस्तावेजमा छलफल गर्न पुस १ गते बिहान ८ बजेदेखि बन्द सर्त सुरू हुनेछ। शनिबार बिहान ११ बजे उद्घाटन समारोहपछि दस्तावेज पेश गर्ने तयारी छ।
पार्टीका महासमिति सदस्यलाई सात प्रदेशमा अलगअलग राखेर पाँच वटै दस्तावेजमाथि सामूहिक छलफल गराइनेछ। दस्तावेजले समेटेका विषयवस्तुबाहेक अन्य कुरा राख्न मन लागे बन्दसत्रमा राख्न पाइन्छ।
समूह-समूहबाट आएको धारणा एकीकृत गरेर निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिन्छ। सर्वसम्मत पास नभए मतदानबाट विधान तथा नीतिहरू पास गरिन्छ। मतदानमा जाने हो भने दुई तिहाइ मतबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
विधानलाई पास गर्ने दुई प्रक्रिया छन्।
सर्वसम्मत पास गर्ने र मतदान।
फरक-फरक मतबाट एउटै मत बनाएर जाने कांग्रेसको परम्परा नै भएकोले नेताहरूले सहमतिमै विधानलगायत नीति नियम बनाउनेमा शर्मा भने ढुक्क छन्।
तर महासमिति बैठकको संघारमा पनि कांग्रेसले संघीय विधान मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन। पदाधिकारी संख्या थप गर्ने/नगर्ने, केन्द्रीय कार्यसमिति संख्या बढाउने वा अहिलेकै यथावत् राख्ने,मनोनित गर्ने प्रक्रिया हटाएर निर्वाचनबाट नै आउनु पर्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने?, क्रियाशील सदस्यता हटाउने कि थप व्यवस्थित गर्ने भन्नेजस्ता मूल विषयमा सभापति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमूहका बीचमा मतभेद कायमै छ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाले संशोधिन विधान मस्यौदाबारे केन्द्रीय समितिमा गहन छलफल भइराखेको छ भने छिट्टै विधान टुंग्याइने बताए।
प्रवक्ता शर्माले केन्द्रीय समितिबाट सहमत हुन नसकेका केही विषय महासमितिमा पनि छलफल हुन सक्ने बताए। यो महासमिति बैठकले चुनावी हारपछि अलमलिएको कांग्रेसलाई थप उर्जा दिने शर्माले बताए।
‘अघिल्लो निर्वाचनमा पराजय भएको दल व्यवस्थित नहोला कि भन्ने जनताको चिन्ता छ, नागरिकले भरोसा गर्ने दलको रूपमा कांग्रेस रूपान्तरित भएर आउँछ,’ शर्माले भने, ‘अहिले कम्युनिस्ट पार्टी गणितीय रूपमा बलियो छ। निर्वाचनको बेला ऊ राजनीतिक रूपमा पनि बलियो थियो। तर अहिले कमजोर हुँदै गयो। महासमितिपछि कांग्रेस गणितीय रूपमा कमजोर रहिरहला तर राजनीतिक रूपमा पहिलाभन्दा बलियो भएर आउँछ।’
रामशाहपथस्थित सिंहदरबारअगाडि योगम्बर पार्टी प्यालेसमा हुने बैठकमा २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ५ जनाका दरले एक हजार दुई सय, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सभापतिहरु बैठकका सहभागी हुनेछन्। महासमिति सदस्य नभएका जिल्ला सभापतिहरू पर्यवेक्षकको रूपमा बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्।
Previous विवेक समूहले हतियार बुझाएर ग-यो आत्मासमर्पण
Next नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा गाडी दुर्घटना, १८ जनाको मृत्यु